Naseho ny : 23 jona 2020
Niteraka fikorontanan-tsaina ho an'i Dera ny fiantrany an'i Soa zanak'Ambatomainty tratra hariva teo am-piandrasana taxi-brousse hody any an-tanànany, noho ny fiara simba ka tsy afaka ny hanainga io andro io. Nampiantranoany tany an-tokantranony i Soa, satria tsy afa-nanoatra izy. Ny reniny no niandry an'i Vola tany amin'ny hopitaly. Lalina nefa ny adin-tsainy mandrapahatongan'ny fotoana nampahafantarana an'i Vola ny zava-nitranga rehetra, izay tsy niafina tamin'ireo mpanampy azy ireo sy ny rafozam-baviny.
Naseho ny : 20 jona 2020
Tsy hitan'i Dera izay horaisina sy izay hoatao rehefa tafiditra tany amin'ny trano fiterahana i Vola. Nanampy trotraka ny nahazo azy ny vazivazy zary tenany nataon'ilay mpampivelona nifanindran-dàlana taminy teny amin'ny làlan-tsaran'ny trano fiterahana. Niatrika ary toy ny niara-niteraka tamin'i Vola mihitsy i Dera rehefa nasain'ny mpampivelona nandroso.
Naseho ny : 19 jona 2020
Tsy zavatra moramora koa, indrindra fa tamin'i Dera ny nahazoan'izy sy i Vola an'i Rivo zanak'izy ireo. Henatra sy fihetseham-po hafa no tsaroany tamin'ny nisehoan'izany toe-javatra izany. Tsapany fa mafy ihany koa ny zakain'ny raim-pianakaviana amin'io andro manokana iterahan'ny vehivavy io.
Tonga tao an-tokantranony ihany i Dera nony farany. Fifaliana no nihaonany tamin'ireo vady aman-janany. Namonjy fiangonana izy, na dia reraka tokony haka aina aza, ary dia tafahaona tamin'ireo olona nifankahita tava taminy farany, talohan'ny nandaozany ny tokan-tranony, noho ilay fahalemeny nanahirana azy. Hitan-dRasamy ihany koa ny poketrany very fony izy notorian'i Ramavo sy ny namany tany amin'ny paositry ny polisy.
Pejy 4 amin'ny 58